प्रचण्डलाई उत्तर कोरिया भ्रमणका लागि सर्वोच्च नेता किमको निम्तो - Everest Dainik - News from Nepal
प्रचण्डलाई उत्तर कोरिया भ्रमणका लागि सर्वोच्च नेता किमको निम्तो
काठमाडौं, असार २६ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष प्रचण्डलाई उत्तरकोरियाली सर्वोच्च नेता किम जंङ उनले प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियाको भ्रमणका लागि निम्तो दिएका छन् ।
उत्तर कोरियाली राजदूत किम योंग हकले नेकपा केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा मंगलबार अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका छन् । सो अवसरमा राजदूत योंगले उत्तर कोरिया स्थापनाको ७७ औं वर्षगाँठका अवसरमा आगामी भाद्र २४ (सेप्टेम्बर ९) मा गते हुने कार्यक्रममा सहभागीताका लागि अध्यक्ष प्रचण्डलाई उत्तर कोरिया भ्रमणको लागि औपचारिक निम्ता पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
याे पनि पढ्नुस कांग्रेसकी पूर्वसांसद मल्ल नेकपा प्रवेश
नेकपा सचिवालय बैठक सकियो, के के भए निर्णय ?
प्रचण्डलाई उक्त निम्ता सत्तारुढ वकर्स पार्टी अफ कोरियाको तर्फबाट दिइएको थियो । निम्तापत्र ग्रहण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टी उत्तर कोरियामा भ्रमण टोली पठाउन तयार रहेको बताएको प्रचण्डको नीजि सचिवालयले जनाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस नेकपाले कसरी टुंगो लगाउँदै छ तल्ला कमिटी ?
भेटमा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालकाे पनि सहभागी थिए । नेपालले केही समय अघि उत्तर काेरियाकाे भ्रमण गरिसकेका छन् । नेपालबाट उत्तरकाेरियाकाे भ्रमण गर्ने उनी पहिलाे पूर्वप्रधानमन्त्री हुन ।
भेटघाटमा प्रचण्डले पछिल्लो समय कोरियाली प्रायद्वीपमा नाटकीरुपमा भएको सकारात्मक परिवर्तनको उच्च प्रशंसा गर्दै खुशी व्यक्त गरे । तीब्र गतिमा भइरहेको राजनीतिक तथा कुटनीतिक विकासक्रम विश्वमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको प्रचण्डको भनाइ छ ।
याे पनि पढ्नुस अब कैलालीमा महाकालीको शुद्ध खानेपानी आउँछः सांसद भट्ट [भिडियाेसहित]
ट्याग्स: cpn, north korea, prachada